Sausage & Ham Kugadzira Fekitori - China Sausage & Ham Kugadzira Vagadziri, Vatengesi
Bhekoni Kugadzira Line
Iyo bhekoni yekugadzira mutsara ndeye otomatiki yekugadzira mhinduro pane hwaro hwekuchengetedza iyo yechinyakare yekugadzirisa tekinoroji. Iyo inovimbisa hunhu uye zvakanakira zvigadzirwa zvebhekoni, nepo ichiwedzera kugona kwekugadzira uye ichideredza mutengo wevashandi. Kutenda kune zvemhando yepamusoro zvinhu uye kunyatso kudzora kwemidziyo, iko kunoonekwa kushanda uye kugadzirwa kuri pachena. Bhekoni ine zvido zvepamusoro zvezvinhu zvakagadzirwa, uye nyama yenguruve yakaonda inowanzo shandiswa. Fi ...
Chinese Soseji Kugadzira Line
Chinese -style sausage inoreva zvigadzirwa zve nyama zvine maChinese hunhu zvinogadzirwa kubva munyama sezvinhu zvakagadzirwa, zvakatemwa kuita machubhu, zvinowedzerwa nezvinhu zvekubatsira, uye zvinodururwa mumhuka dzematehwe, zvozoviriswa nekukura. Ndiyo chikamu chikuru chezvigadzirwa zve nyama muChina. , Unyanzvi hwayo hwakafanana nesarami. Zvinoenderana nekunakirwa kwakasiyana, panogona kunge paine zvigadzirwa zvakasiyana senge zvinotapira uye zvinonhuwira. Kubva pane izvi, zvinokwanisika kugadzira salami nekuchinja imwe ...